Lego 71031 Marvel စတူဒီယို Minifigures သေတ္တာအပြည့်ဖြန့်ချီ
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 420 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
အက္ခရာ ၁၂ လုံးမှတစ်ခုနှင့်မည်မျှကိုရှာပါ Lego 71031 Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစား သေတ္တာအပြည့်ဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်။
၎င်းတွင်စုဆောင်းရန်အက္ခရာ ၁၂ လုံးရှိသည် 71031 Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး၊ မှယူသည် Marvel'' s ကို Disney+ WandaVision၊ Falcon နှင့်ဆောင်းရာသီစစ်သား၊ Loki နှင့်ဘာဖြစ်လျှင်…? သူတို့တစ် ဦး စီကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုအတွက်.
ဒီကြားထဲမှာမင်းကမင်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အစအနကိုလိုက်ရှာချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် p မှာအက္ခရာတစ်လုံးတည်းနဲ့နေချင်လားartမင်းမှာရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Spider-Men ရဲ့စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်၊ ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး စီကိုအကွက်အပြည့်အစုံမှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကွဲလွဲချက်အချို့ကိုဒီမှာ Brick Fanatics ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အဘို့။
သေတ္တာတိုင်းတွင်တူညီသောဖြန့်ဖြူးမှုရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်တတ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အတွင်းပိုင်းရှိအရာကိုခံစားချက်ကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါart Captain America နှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်ကောင်အားလုံးကိုသူတို့၏ဒိုင်းများနှင့် ... )
T'Challa စတား - Lord Sylvie
T'Challa စတား - Lord T'Challa စတား - Lord
ဆောင်းရာသီ Soldier အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်
Captain America Scarlet စုန်းမ
မော်နီကာရက်ဘို ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းအစုံအလင်သုံးစုံရှိတယ် 71031 Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစား ပြီးပြည့်စုံသောအကွက်တစ်ခုစီတွင် အထက်ပါကဲ့သို့အကွက်တိုင်းသည်တူညီသောသေးငယ်သောပုံသဏ္distributionန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအာမခံမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ၊ ဒါပေမယ့်မင်းအကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေကိုမင်းလိုက်လံရှာဖွေရာမှာအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ် ဦး မှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
← နောက်ထပ် LEGO ရဲတိုက်သည် LEGO တွင် 10K ထိရောက်သည် Ideas
Lego Star Wars 10178 Motorized Walking AT-AT ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း →